Passa fitaterana ho an'ny Fanjakan'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-02 > Mandalo fiondranana ho an'ny Fanjakan'Andriamanitra
Tao amin'ny seranam-piaramanidina dia nisy ny birao fampandrenesana nilaza hoe: Azafady pirinty ny pasipaoronao, fa raha tsy izany dia tsy maintsy mandoa lamandy ianao na mety tsy ho tonga. Nahatonga ahy hitebiteby be izany fampitandremana izany. Notohizako hatrany ny pasipaorom-pirinty vita pirinty teny am-pelatanako mba hahazoana antoka fa mbola teo!
Manontany tena aho hoe manao ahoana ny fomba tsy maintsy ataon'ilay fo mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moa ve mila manomana ny entantsika isika araka ny voafaritra mazava sy manome ireo antontan-taratasy tsara? Misy ve ny mpandinika fisavana izay vonona hanala ny anarako amin'ny lisitry ny sidina raha tsy mahafeno ny fepetra takiana rehetra aho?
Ny marina dia tsy mila manahy isika fa i Jesoa no nandamina ny zavatra rehetra ho antsika : « Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika ! Noho ny famindrampony lehibe dia nanome antsika fiainam-baovao. Nateraka indray isika satria natsangana tamin’ny maty Jesosy Kristy, ary feno fanantenana velona isika ankehitriny. Fanantenana ny lova mandrakizay, tsy voaloton’ny ota sy tsy mety simba, izay efa nomanin’Andriamanitra ho anareo amin’ny fanjakany.”1. Petrus 1,3-4 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Ny Pentekosta kristiana dia mampahatsiahy antsika ny hoavintsika be voninahitra amin'i Kristy ao amin'ny fanjakany. Tsy mila manahy. Nanao ny zavatra rehetra i Jesosy ho antsika. Izy no nanao ny famandrihana sy nandoa ny vidiny. Manome antsika antoka izy ary manomana antsika hiaraka aminy mandrakizay.
Ny mpamaky voalohany ny 1. Niaina tamin’ny fotoana tsy azo antoka i Petera. Tsy rariny ny fiainana, ary nisy fanenjehana tany amin’ny toerana sasany. Natoky zavatra iray ny mpino: “Mandra-pahatongan’izany, dia hiaro anareo amin’ny heriny Andriamanitra, satria matoky Azy ianareo. Ary noho izany dia hiainanao amin'ny farany ny famonjeny, izay ho hitan'ny rehetra amin'ny andro farany »(1. Petrus 1,5 Fanantenana ho an'ny rehetra).
Mianatra momba ny famonjena antsika isika, izay ho hita amin’ny faran’ny andro! Mandra-pahatongan'izany, Andriamanitra dia hiaro antsika amin'ny heriny. Tena mahatoky i Jesosy ka nanokana toerana ho antsika ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra: “Misy trano maro ao an-tranon’ny raiko. Raha tsy izany, dia ho nilaza taminareo va Aho hoe: Handeha hamboatra ny fitoerana ho anareo Aho? (Jaona 14,2).
Ao amin’ny Taratasy ho an’ny Hebreo, aorian’ny fandikana ny Baiboly, dia asehon’ny fanantenana ho an’ny rehetra fa voasoratra any an-danitra isika, izany hoe ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. “Ianareo dia anisan’ny zanany, izay notahiny manokana ary voasoratra any an-danitra ny anarany. Ianao no nialoka tamin’Andriamanitra izay hitsara ny olona rehetra. Ianareo dia anisan’ny fiangonana lehibe iray tahaka ireo modely amin’ny finoana rehetra ireo, izay efa nahatratra ny tanjony ka efa nahita ny fankasitrahan’Andriamanitra” (Hebreo 1.2,23 Fanantenana ho an'ny rehetra).
Taorian’ny niakaran’i Jesosy tany an-danitra, dia nandefa ny Fanahy Masina hitoetra ao anatintsika i Jesosy sy Andriamanitra Ray. Tsy vitan’ny hoe manohy ny asan’ny fanjakan’i Kristy ao anatintsika fotsiny ny Fanahy Masina, fa izy koa no “antokin’ny lovantsika”: “izay antoka ny lovantsika, ho fanavotana antsika, mba ho fananany amin’ny fiderana ny voninahiny” (Efes 1,14).
Tadidinao angamba ilay hiran'i Doris Day, Ringo Starr ary mpihira hafa. Mazava ho azy fa mihoatra lavitra noho ny fahatsiarovana sy fanantenana feno fanantenana ny hoavintsika amin’Andriamanitra: “Izay tsy mbola hitan’ny maso, tsy mbola ren’ny sofina, ary tsy mbola fon’olona, ​​dia izay namboarin’Andriamanitra ho an’izay tia Azy.”1. Korintiana 2,9).
Na izany aza, mahatsapa ianao amin'ny dianao mankany amin'ny Fanjakan'Andriamanitra, aza avela hanelingelina anao ny fanambarana mifanohitra ary aza mampahatahotra anao toy ny teo aloha. Matokia fa manana famandrihana azo antoka ao amin'ny paosinao ianao. Tahaka ny ankizy dia afaka manantena ny fiotazana ao amin'i Kristy ianao.